Golaha Wakiiladda Oo Ansixiyay Ajandaha 35-aad iyo Xeerarka Ku Jira | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Golaha Wakiiladda Oo Ansixiyay Ajandaha 35-aad iyo Xeerarka Ku Jira
Hargaysa (SDWO): Golaha Wakiiladda Somaliland ayaa maanta ansixiyay ajandaha kal-fadhigooda 35-aad ee golaha oo furmay fadhigii kan ka horeeyay, kaasoo ka kooban 18 xeerar oo muhiimad weyn u leh qaranka.
Fadhigan oo ahaa kii saddexaad ee fal-fadhiga 35-aad waxaa shir-gudoominayay guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax, waxaana ka soo xaadiray 52 mudane oo ka mid ah 82 xildhibaan ee uu aqalka Wakiiladu ka kooban yahay.
Markii codka ansixinta loo qaaday ajandaha kal-fadhiga 35-aad waxa ogolaaday 32 xildhibaan, waxaana diiday 8 mudane, halka 11 xildhibaana ay ka aamuseen, iyadoo guddoomiyuhuna aanu codaynin.
Sidaas ayaanu kal-fadhiga 35-aad golaha Wakiiladu ansax ku noqday, iyadoo la filayo in xildhibaanadu ay fadhiyadda danbe guddo geli doonaan doodda iyo soo jeedimaha xeerarka iyo qodobadda ku jira kal-fadhigani.
Ajandaha kal-fadhigan 35-aad ee golaha Wakiiladda oo ay ku jiraan 18 xeer waxa ka mid ah, qabyo-qoral xeerka guud ee degaanka (National Environment Law), xeerka shirkadaha (Company Law), qabyo-qoraal xeerka sahaminta shiidaalka iyo soo saaristiisa iyo qabyo-qoraalka xeerka ilaaladda xeebaha Somaliland. Xeerarkaasi ayaa dhamaantood waxay marayaan akhriskii kowaad.
Sidoo kale waxaa ka mida xeerarka ku jira ajandaha kal-fadhiga 35-aad ansixinta masuuliyiinta qaranka, xeerarka golaha Guurtida ka soo noqda iyo wixii kale ee soo kordha.
Geesta kale Baashe Maxamed Faarax, ayaa xildhibaanadii madasha joogay iyo kuwa maqanba ku wargeliyay in ay golaha hor yalaan saddex xeer oo ka soo naqday madaxweynaha, kuwaasoo kala ah xeerka booliska, xeerka xabsiyadda iyo xeerka duulista hawadda.
Xeerarkan oo ay hore golaha Wakiiladu u ansiiyeen, ayaa maadaama oo uu madaxweynuhu ku soo celiyay ay tahay in ay mar kale waajibkooda ka ka gutaan.
Waxa kaloo uu gudoomiyuhu u sheegay xidlhibaanadda in xeerarkaasi dib loogu qaybin doona xildhibaanadda fadhiga kan xiga.
Dhinaca kale fadhiga maanta ee golaha Wakiiladda waxaa ku cusbaa saddex xildhibaan oo golaha ku soo biiray, kuwaasoo ka soo galay jagooyinkii ay baneeyeen laba xildhibaan oo geeriyooday iyo kursigii uu baneeyay C/raxmaan Cirro guddoomiyaha xisbiga Waddani.